Saturday October 29, 2016 - 10:09:41 in Wararka by
Maleeshiyaadka DF-ka ayaa ah kuwa tabar daran
Ciidamada Itoobiya waxaa duullaanka ay kusoo qaadeen ku wehliya maleeshiyaad calooshood u shaqeystaal Soomaali ah, maleeshiyaadkan waxay ciidan qaran u yihiin dowladda Federaalka ee gumeystaha la shaqeysa.
Marka ciidamada Itoobiya isaga baxaan magaalo ama deegaan maleeshiyaadkii ciidanka qaran lagu sheegayay kama haraan ciidanka Itoobiya ee waa ka daba lugeeyaan xataa Itoobiyaanku uma ogola in gaadiidkooda dagaalka ay la raacaan.
Xildhibaan Afaraale oo katirsan Baarlamaanka DF-ka ayaa xaqiijiyay in dowladda uu katirsanyahay aysan laheyn ciidan isagoo ku cataabay magaalooyinkii dhowaan laga qabsaday.
Wuxuu qiray in ciidamadoodu aysan awoodin in ay ubabac dhigaan xarakada Shabaabu Mujaahidiin, Afaraale ayaa taak darida heysata ciidankooda usababeeyay cunaqabateyn dhanka hubka ah oo heysata iyo iyagoo aan helin Mushaar joogta ah.
"Askarigu wuxuu leeyahay sedax calool oo kala ah caloosha xaaskiisa, calooshiisa iyo caloosha qoriga uu ku dagaallamayo intaas haddii aan la helin askarigu dagaal mageli karo”ayuu yiri Afaraale.
Wareysi dhinacya badan taabanaya oo Afaraale uu siiyay Idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayuu uga hadlay la wareegistii degmada Tayeegloow ee ciidanka Al Shabaab iyo ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee la filayo in ay ka baxaan deegaano Bakool katirsan.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Afaraale MP3